Leonid Razvozzhaev: Biography, isithombe, unkosikazi, umndeni
Ngaphambi izenzakalo Bolotnaya Square, igama leonid Razvozzhaeva kwakukuncane ajwayelekile. Kodwa igagasi imibhikisho nasezinxushunxushwini ukuthi bathintitha inhloko-dolobha yaseRussia ngo 2011-2012, waphenduka konke esiphendula esibhekisa phansi. Ezivamile isibalo somphakathi leonid Razvozzhaev yaphenduka isigebengu zezombusazwe, itulo lokuketula uhulumeni.
Kodwa yeka ukuthi uyiqiniso kanjani lezi zinsolo zenziwa nguye? Ayikwazanga leonid Razvozzhayev ukuhileleka izingxabano ku Bolotnaya Square? Futhi yini esiyaziyo ngalo muntu?
Razvozzhaev leonid: Biography minyaka yokuqala
Ikusasa isibalo somphakathi, wazalwa Juni 12, 1973. Kwathi kwase-Angarsk, e-esifundeni sase-Irkutsk. ukuqeqeshwa kwakhe wokuqala kwaqala ngo inombolo esikoleni 4. Kusukela zonke ezihlukahlukene lezinto kuye kwaba umsebenzi ozithandayo njalo. Hhayi ngaphandle isizathu wayeyilungu Angara sigaba isibhakela esemncane leonid Razvozzhaev ngisho eyenziwa ngaso imincintiswano zendawo.
Ngemva kokuphothula esikoleni yangena esikoleni sokufundela ukuthola okukhethekile "gazoelektrosvarschik". Kodwa esikhundleni kokuqala ukuthuthukisa emsebenzini wakhe, wanquma ukuvula ibhizinisi lakhe siqu. Ngaphezu kwalokho, waqala ukufundela umsebenzi ngo-1993 ephephandabeni "Independent Review".
Ngo-1997, wayephenywa njengofakazi esimweni necala lokubamba inkunzi. Ngakho, ngesikhathi esithile Vyacheslav Skudenkova intshontshiwe 500 ofeleba fur okumsulwa, ngaleso sikhathi imali enkulu. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi ekhetheke kangaka? Kodwa eminyakeni engu-15 kamuva le ndaba futhi ovulekile, kanti umsolwa main kuzokwenza leonid Razvozzhaev.
Ngo-1998, wahlanganyela ukunyakaza ukuphikiswa Left. Lokhu okwamanje kubhekwa senguquko isiphetho izishoshovu esizayo. Phela, uma ukwenza ngenye indlela, mhlawumbe, Isiphelo sakhe kwakuyoba ezahlukene ngempela.
Ngo-2003, leonid Razvozzhaev enquma ukuthuthela eMoscow. Ekuqaleni, wathola umsebenzi wokuba umshayeli Russian Communist Party iPhini Ilya Ponomarev. Kodwa ngokushesha isikhundla umshayeli elula bakhathala ngaye, leonid waqala ukuzama yena kwezombusazwe.
Ukunqoba sokuqala esibalulekile kwaba ukungena iyunithi iqembu "Motherland". Ngokusho kwamaphepha olusemthethweni, wasebenza khona kusukela ngo-2005 kuya ku-2007. Endleleni, leonid Razvozzhaev waqhubeka esebenza e-ukukhuthazwa ithonya Left Front. Ikakhulukazi, 2004 waba omunye obaba abaqamba ukunyakaza "Youth Left Front".
Ngo-2011, leonid Razvozzhayev iba usihlalo we Trade Union of abasebenzi yohwebo namasevisi. Futhi ngo-October 2012, kwenza isendleleni kwiBhodi inkambo Left. Maye, kwaba ukunqoba kwakhe zokugcina, ngemva kwalokho kulandele uchungechunge ukunqotshwa ebabayo.
Indaba ukungathembeki komuntu oshade naye
Ekuqaleni kuka-Okthoba 2012 isiteshi se-TV Russian "NTV" ukhiphe ifilimu ngokuthi "Anatomy of umbhikisho - 2". Lesi sithombe kwembula izimfihlo kwesiqinti nokwelukiweyo ukuze ukukhulisa negagasi isiyaluyalu enhlokodolobha yeRussia. Ukweseka lokhu ithiyori, abalobi tape ahlinzekwa ubufakazi obuqand '- ividiyo emhlanganweni ngokwawo, lapho isiphetho ezweni.
Protagonists babe Givi Targamadze, Mikhail Iashvili, leonid Razvozzhaev futhi Sergei Udaltsov. Bonke abantu ababe yizibukeli ngesikhathi esifundweni esasiqhutshelwa ngasese esenzeka e Minsk, engxenyeni Juni 2012 yesibili.
Ngemva kokukhishwa kukamagazini i abaphathi impahla leKomiti Investigative bafaka icala abahlanganyeli umhlangano. Futhi ngenkathi hhayi wonke umuntu bakholwa ukuthi ayiqiniso kangakanani amafilimu, amaphoyisa kwakusadingeka oda ukuba abophe leonid Razvozzhaeva.
Ngokusho nezifinyezo Ministry Interior ku federal abafunwa uhlu Razvozzhaeva yamemezela Okthoba 19, 2012. Kodwa isishoshovu kusengaphambili lokhu izinto zase zishintshile bese ebaleka eya Ukraine. Kodwa embuthaneni wokugaya ukuphikiswa, owawusedolobheni inhlokodolobha Russian ngo-October abantu 20 babike ukuthi lo mbaleki ubanjwe.
Ngakho, ngokuvumelana amabutho kwesokunxele-wing, leonid Razvozzhaeva ashaqe amadoda isifihlwa lapho efika e-Ofisini Commissioner High eKiev. Futhi ngemuva kosuku wayiswa eMoscow, lapho wabekwa icala lokwenqaba ngokungemthetho. Ngokwemininingwane enikezwa Iley Ponomarevym, leonid walahla kusihlwa efanayo eNkantolo Basmanny, bephika ilungelo ummeli.
Nokho, maduzane nje, Ministry Russian Interior uye walungiselela neminye imininingwane. Sathi leonid ebuyela eRussia bebodwa, okuyinto kuqinisekiswa wobufakazi amasiko Ukraine. Khona-ke, wafika kulowo Wezangaphakathi futhi wabhala ukuvuma.
Isitatimende ukucindezela ngokucacisa abomthetho
Ngokushesha ngemva nokuvalelwa leonid Razvozzhaeva e inethiwekhi, kunobufakazi ukuthi ahlukunyezwa. Ngoba nje lokhu, wavuma icala lakhe futhi manje kudinga liqulwe kabusha. Nokho, ngo-October 22 wavakashela isiboshwa Anton Tsvetkov futhi, ngokusho kwakhe, azikho izimpawu zokuhlukunyezwa, bekangekhe eyakuthola. izitatimende ezifanayo zenziwa ngabameli imithi. Ngokusho inhlolovo zabo, ukulimala nemihuzuko emzimbeni Razvozzhaeva umane asipheli.
Nokho amahemuhemu bantu esigxotsheni sokuhlushwa bese kabi wamalungelo manje bese uvele kunethiwekhi. Kodwa ngesikhathi esifanayo kusukela Razvozzhaeva asamukelanga izikhalazo olusemthethweni ngezenzo ezingekho emthethweni zemizimba komthetho.
Ngo-July 2014, inkantolo eMoscow wagwetshwa leonid Razvozzhaeva iminyaka engu-4.5 ejele. Futhi, waphoselwa isigwebo malini $ 150 ayizinkulungwane ruble Russian. Liqulwe kabusha noma likashwele ngalesi sikhathi is akulindelekile.
Leonid Razvozzhaev: Umndeni
Ekupheleni Ngifuna ukhulume nomunye iphuzu elibalulekile - mayelana nomndeni lesi sishoshovu. Leonid Razvozzhaev futhi Yulia Smirnova ojabulayo, futhi unezingane ezimbili ezimangalisayo. Amacala abekwa wona okuthi bendoda kwaba inhlekelele kubo.
Phela, ngisho nangemva sinqumo Julia futhi ayizange ikholwe ukuthi leonid eyayihilelekile umbuso. Nakuba ayikwazi ukushintsha oda ekhona sezinto, wamshaya umyeni wakhe ngaleso sikhathi wayengasalubhadi.
Kwamaphekula e Thailand: imicimbi kanye nezimbangela zabo
Ingabe "Surkov propaganda" kunoma iyiphi enye?
Kuvshinnikov Oleg Aleksandrovich: izithombe, biography, umndeni, ukubuyekezwa
Yulia Tymoshenko - Biography, umkhaya nomsebenzi zezombusazwe "Lady Yu"
Okuphakelayo "Sanabel" ngoba amakati - ukudla ephelele
HLela ibhokisi "Smart TV": indlela ukuxhuma kanye nendlela yokusebenzisa
Indlela okumnandi ukupheka ingulube: izinketho elula
Ukudla okunempilo, noma uhlobo luni lwezithelo kungaba mamama abahlengikazi
Ngethephu enamathelayo ngoba umusi izithiyo: izici lobuchwepheshe, injongo netimphawu ukufakwa
Indlela ukhethe yonke imibhalo iZwi na? izindlela ezilula